ल कडाउन हट्यो : कहिलेदेखि के खुल्छ, अझै के खुल्दैन ? - Tufan Media News
ल कडाउन हट्यो : कहिलेदेखि के खुल्छ, अझै के खुल्दैन ?
७ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:२२
काठमाण्डौ – आजदेखि ल कडाउन हटेको छ । चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको ल कडाउन गएराति १२ बजेदेखि अन्त्य भएको हो । आजदेखि सरकारी कार्यालयहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै सञ्चालन गर्ने र गाडीको जोर-बिजोर प्रणाली हटाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
गंगबु घ टना बारे
अंततः अर्जुन बिकको गायक
गोंगबु प्र करण- यस्तो
बिक्रम सुनारको हातले काम
नेपाल फर्किन टिकट लिएका
भर्खरै प्राप्त समाचार ,नेपालमा